35 U-Elihu waqhubeka ephendula wathi: 2 “Ingabe yilokhu okubheke njengobulungisa?Uthé, ‘Ukulunga kwami kungaphezu kokukaNkulunkulu.’+ 3 Ngoba uthi, ‘Kunalusizo luni kuwe?+Nginanzuzoni ngaphezu kokona kwami?’+ 4 Mina ngokwami ngizokuphendulaNgiphendule nabangane+ bakho abakanye nawe. 5 Bheka phezulu ezulwini+ ubone,Futhi ubone amafu,+ ukuthi ngempela aphakeme kunawe. 6 Uma empeleni wona, ufezani ngokumelene naye?+Futhi uma ukuvukela kwakho kwanda, wenzani kuye? 7 Uma ngempela ungenaphutha, umnikani,Noma yini ayamukelayo esandleni sakho?+ 8 Ububi bakho ungabenza kumuntu onjengawe,+Nokulunga kwakho endodaneni yomuntu wasemhlabeni.+ 9 Ngenxa yobuningi bokucindezelwa baqhubeka bekhalela usizo;+Baqhubeka bekhalela usizo ngenxa yengalo yabakhulu.+ 10 Nokho akukho muntu othé, ‘Uphi uNkulunkulu uMenzi wami Omkhulu,+Onika amahubo ebusuku?’+ 11 NguYe osifundisa+ ngaphezu kwezilwane zomhlaba,+Futhi usenza sihlakaniphe ngisho nangaphezu kwezidalwa ezindizayo zamazulu. 12 Lapho bayamemeza, kodwa akaphenduli,+Ngenxa yokuziqhenya+ kwababi. 13 Yilokho okungelona iqiniso kuphela uNkulunkulu angakuzwa,+Futhi uMninimandla onke akakuboni.+ 14 Kangakanani-ke lapho uthi awumboni!+Icala lomthetho liphambi kwakhe, ngakho kufanele umlinde ngokulangazela.+ 15 Manje ngenxa yokuthi intukuthelo yakhe ayizange ifune ukuba kulandiswe,+Akazange futhi akunake ukuphahluka okwedlulele.+ 16 UJobe ngokwakhe uwuvula kakhulu umlomo wakhe ngeze nje;Wandisa amazwi+ nje engenalwazi.”